#Xukumadda oo Muqdisho ka furay shir ay ka qeyb galeen Wasiirada Amniga dowlad Goboleedyada - Get Latest News From Horn of Africa
#Xukumadda oo Muqdisho ka furay shir ay ka qeyb galeen Wasiirada Amniga dowlad Goboleedyada
#Wasiirka Amniga Gudaga
Wasiirka Amniga Gudaha oo shir looga hadlayo dib u habeynta Soomaaliya oo ay ka soo qeyb-galeen hey’adaha Amniga taageera ka furay magaalada Muqdisho.Abdu Khadir Shacab Ali
Publicerat av Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed Måndag 17 juni 2019
Wasiirka Amniga Gudaha ee Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa maanta Muqdisho ka furay shir looga hadlayay Tayeynta Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, kaasoo ay ka qeyb galeen Wasaaradaha Amniga ee dowlad Goboleedyada, Taliyaha Booliska Soomaaliyeed, Qaramada Midoobey, Midowga Yurub, Ingiriiska iyo Jarmalka.
Shirkan ayaa lagu soo bandhiggay Xog uruurin ku saabsan qorshaha tayeynta Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, waxaana ku baxaya lacag gaareysa 45 Milyan oo dollar, waxaana la isku weydaarsaday caqabadaha, wada shaqeynta iyo dib u habeynta Booliska heer Federaal iyo maamul goboleed.
Wasiirada Maamul goboleedyada ee shirkan ka qeyb galay ayaa soo jeediyay in loo baahan yahay in maamul goboleedyada laga hirgeliyo Dusgiyo lagu tababaro ciidanka Booliska, maadaama Xarunta Dugsiga Tababarka Jen. Kaahiye uu yahay dugsiga kaliya ee soo saara Ciidamo Boolis ah.
Wasiirka Amniga oo shirka furay ayaa sheegay in dowladda Federaalka ay xoogga saareyso dib u habeynta iyo tayeynta Ciidanka Booliska Soomaaliyeed heer Federaal iyo heer maamul goboleed.
Mr Islow Ducaale ayaa sheegay in shirkan uu yahay wajiga labaad, isla markaana maamul goboleedyada ay soo codsadeen baahida ay qabaan, isagoo xusay in ahmiyada koowaad la siin doono tayeynta Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Shirkan ayaa ahaa kii u horeeyay ee ay ka soo qeyb galaan Wasiirada Amniga Maamul Goboleedyada, tan iyo markii muddooyinkan uu soo xoogeysanayay khilaafka dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada, waxaana xusid mudan in dhowr jeer hore ay Madaxweynayaasha Maamul goboleedyada ay diideen inay ka soo qeyb galaan shirar loogu yeeray magaalada Muqdisho.